décembre 2018 - Page 3 sur 76 -
Préfet de police Antananarivo : Tsy nanao « réquisition » ny EMMO Reg ho fiarovana ny vahoaka
Amina fihetsiketsehana an-dalambe toy ny hitranga etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai amin’ity andro ity, dia ny manampahefana sivily toa ny “Prefet” no tomponandraikitra voalohany amin’ny fitandroana ny filaminana amin’ilay toerana hanaovana fihetsiketsehana. Izy araka izany …Tohiny
Antananarivo Renivohitra : Mitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana
Vao nigadona ity volana desambra ity, nanomboka ary niha-nitombo tsikelikely ny fitohanan’ny fiara teto an-dRenivohitra. Nanomboka nisy fitohanambe kosa ny miditra an’Analakely sy Anosy ary tamin’ireo faritra manodidina teto Antananarivo nanomboka andro vitsy nialoha ny …Tohiny
Lozam-pifamoivoizana teny Iavoloha : Olona 19 naratra mafy
Nitondra faisana ny mpandeha, potika avokoa ireo fiara nijanona teny amoron-dalana noho ny nafitsoky ny mpamily ny “semi remorque” iray tapaka hisatra, ary olona 19 no fantatra fa naratra mafy vokatry ny lozam-piarakodia niseho teny …Tohiny
Ady amin’ny tsy fananan’asa : Nomena fiofanana ireo tanoran’i Boeny
Tafiditra aoa antin’ny politikasan’ny asa sy ny ady amin’ny tsy fananan’asa. Naharitra roa andro, ny 27 sy 28 desambra teo, dia nomena fiofanana ireo tanoran’i Boeny. Nifantoka tamin’ny « fanofanana ireo tanora amin’ny tao-trano, ny …Tohiny
Niezaka nanadio tena mafy i Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina tato ho ato. Indro atolotra ny mpamaky sy ny vahoaka malagasy ny famotsiam-bola nataon’ny filoha tale jeneralin’ny SODIAT tratran’ny Fitsarana tany Parisy, ary efa eo ...Tohiny